अब पहिराले पानी रोक्दैन ! – सुनौलो अनलाइन
अब पहिराले पानी रोक्दैन !
सुनौलो अनलाइन३० माघ २०७७, शुक्रबार १३:२७
बागलुङ बजारमा १६ किलोमिटर टाढाको मुहानबाट पानी आउँछ । काठेखोला गाउँपालिकाको रेशखोला र भुँदीखोला मुहानबाट आउने पानीले स्थानीयवासीको प्यास मेटाएको छ ।
बोरिङ प्रविधिको पानी निकाल्दा अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएको ट्याङ्करको पानी विस्थापित हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जमिनमुनिको पानी निकालेर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । पानी निकाल्ने काम सकिएकाले बाँकी संरचनाको काम अघि बढाइने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट शैलेन्द्र विक पोखरेलले बताउनुभयो । डिटिएच रक ड्रिलिङले केही दिन पहिलेबाट बोरिङ खन्ने काम थालेको थियो । कम्पनीले दुई साताभित्रै २२० मिटर जमिनमुनिबाट पानी निकालेको कम्पनीका सुपरभाइजर सूर्य चिमरीयाले बताउनुभयो ।
प्रतिसेकेण्ड २ दशमलव ७५ लिटर पानी निकाल्ने लक्ष्य छ । बोरिङ खन्नका लागि मात्रै मन्त्रालयले रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । “खन्ने काम १९ लाखमा हुन्छ, त्यसपछि जेनेरेटर र प्लम्बिङको काम बाँकी रकमले गर्ने हो”, अस्पतालका लेखा अधिकृत झलक आचार्यले भन्नुभयो, “रकम अपुग नहोला भन्ने छ, कम भए मन्त्रालयमा लेखी पठाउँछौँ ।”
जमिन मुनिबाट आएको पानीलाई एक लाख लिटरको ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर अस्पताल भवनमा वितरण गरिने छ । ट्याङ्की निर्माणका लागि मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तत्कालका लागि मौजुदा ट्याङ्कीको प्रयोग गरेर पानीको वितरण शुरु हुने अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । जमीनमुनिको पानी तानेपछि अस्पतालमा रहेको पानीको समस्या समाधान हुने अस्पताल विकास समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले बताउनुभयो ।
पहिले आठ इञ्च ड्रिलिङ गरेर १०० मिटर जमीनमुनि खनेपछि आकार घटाउने छ इञ्चको पाइप राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । जमीन मुनिको पानी निकाल्दा अस्पताललाई वार्षिक २० लाख रुपैयाँ खर्च कटौती हुने सदस्य शर्माले बताउनुभयो । “ट्याङ्करको पानी ल्याउँदा वार्षिक लाग्ने खर्चले मात्रै बोरिङ खन्ने काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अरु खर्च हुन्छ तर दुई वर्ष पानी किन्ने खर्च मात्रै अहिले लगानी गर्दा २० वर्षलाई पानीले ढुक्क हुन्छ ।” तराईमा जमीन मुनिको पानी निकाल्ने काम सहज भए पनि पहाडमा भने चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यसअघि बागलुङकै चिल्ड्रेन लाइफ बोर्डिङ स्कुलले जमीन मुनिको पानी निकालेर प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
जैमिनी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँ ‘लाहुरेको गाउँ’ भनेर चिनिन्छन् । बढ्दो महङ्गी, विलासी जीवन र समय सुहाउँदो रहनसहनको व्यवस्थापनका लागि यहाँका युवा माध्यमिक तहको पढाइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।